Panda Bear: pakati porudo nekutyisa | Kufamba Nhau
Panda Bear: pakati porudo nekutya
Maria Jose Roldan | | China, Kufarira, Asia kufamba
Nyika yakakura kwazvo pasi rose, China, ine mhuka yekuzvarwa inoonekwa sehunhu: iyo Panda Bear, mhuka inodya nyama inotangira munyika yekumabvazuva. Ivo vanoshanyirwa kwazvo munzvimbo dzinochengeterwa mhuka, kwete dzemuno chete, asi mune dzimwe nzvimbo zhinji dzenyika. Iyo Panda Bear inozivikanwa zvekuti ndiyo logo yehomwe yepasi inochengetedza mhuka, WWF.
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti mhuka iyi parizvino iri munjodzi yekutsakatika. Kazhinji inogona kuratidzika semhuka yakadzikama uye isina mhaka, asi dzimwe nguva inogona kuve imwe yenjodzi huru iriko papasi redu.
1 Iyo panda inobereka
2 Muvengi wepanda
3 Inoita pandas kurwisa?
4 Nhau nezve panda inotakura Gu Gu
5 Panda inobereka Gu Gu
Iyo panda inobereka
Iyo panda bere imhuka yakanaka, hombe iyo nechitarisiko chayo pasina mubvunzo inoita kunge hofori yakakara mhuka, asi inopfuura kungoonekwa. Iyo panda bere ine isingagutsike nzara yemushenjere, inowanzo kudya hafu yezuva: huwandu hwese hwemaawa gumi nemaviri uchidya. Anowanzodya anenge makirogiramu gumi nematanhatu emishenjere kuti asangane nezvido zvake zvezuva nezuva zvekudya uye anotsemura madzinde nemapfupa ake echiuno, ayo akareba uye anoshanda sezvigumwe. Dzimwe nguva mapanda anogona zvakare kudya shiri kana makonzo.
Masango pandas anogara munzvimbo dziri kure, dzine makomo epakati peChina. Izvi zvinodaro nekuti munzvimbo idzi mune masango emushenjere akakwirira uye vane chirimwa ichi nenzira nyowani uye ine mwando, chimwe chinhu chavanoda. Pandas dzinogona kukwira nekukwira kumusoro kuti dzidye kana zvirimwa zvikashomeka, senge muzhizha. Ivo kazhinji vanodya vakagara pasi, mune yakasununguka mamiriro uye nemakumbo avo ekumashure akatambanudzwa. Kunyangwe ivo vachiita sekunge vakagara, havasi sezvo ivo vari nyanzvi yekukwira miti uye vanoshambira kwazvo.
Pandas mabheya vari vega uye vane pfungwa yakasimukira kwazvo yekunhuwidza, kunyanya muvanhurume kuti vadzivise kusangana nevamwe uye nekudaro vakwanise kutsvaga vakadzi uye vagokwanisa kukwirana muchirimo.
Vakadzi pavanobata pamuviri, kubata kwavo kunotora mwedzi mishanu uye ivo vanozvara mwana kana maviri, kunyange vasingakwanise kuchengeta vaviri panguva. Panda vacheche mapofu uye madiki kwazvo pakuzvarwa. Panda vacheche havagone kukambaira kwemwedzi mitatu, kunyangwe vachiberekwa vachena uye kazhinji vanogadzira iyo nhema uye chena mavara gare gare.
Nhasi kune mapaundi angangoita chiuru musango, vangangosvika zana vanogara munzvimbo dzinochengeterwa mhuka. Zvese zvinozivikanwa nhasi nezve pandas ndezvekutenda kune avo vari mukutapwa sezvo mapasango epasango anonetsa kusvika. Kunyangwe hazvo chiri chokwadi, iyo yakanakisa nzvimbo yepanda bere, semhuka chero ipi zvayo, iri munzvimbo yayo uye kwete munzvimbo inochengeterwa mhuka.
Ivo havawanzo kuve nevazhinji vavengi sezvo panowanzove pasina zvikara zvinoda kuzvidya. Kunyangwe muvengi wake mukuru munhu. Kune vanhu vanoda kuvhima pandas kune avo akasarudzika matehwe uye mavara. Kuparadza kwevanhu kunoisa panjodzi nzvimbo yavo yekugara uye iyi ndiyo tyisidziro huru uye yavasundira kumucheto kwekutsakatika.
Mumwe muvengi anogona kunge ingwe yechando. Icho chikara chinogona kuuraya panda vana kana amai vakatsauswa kuidya. Asi kana amai varipo, ingwe haishingi kurwisa nekuti inoziva kuti ingangokundwa nyore.
Inoita pandas kurwisa?
Kurwiswa kwepanda hakuwanzo sezvo vachidzivirira vanhu nenzvimbo dzavanogara. Panda yemusango kashoma kusangana nemunhu, kunyangwe panda yakatsamwa nekuti yakatsamwiswa kana nekuti vana vayo vakavhiringidzwa vanogona kurwisa kuti vazvidzivirire.
Mune nzvimbo dzinochengeterwa mhuka, panda mabheya anoyevedza asi kunyangwe zvisingawanzoitika, anogona kurwisa kana achinzwa kupinda nechisimba kana kukanganiswa. Kunyangwe vakataridzika kunge teddy bere, ivo vanofanirwa kuve vanokudzwa senge chero imwe mhuka yemusango.
Nhau nezve panda inotakura Gu Gu
Pane akati wandei nhau iyo inosvika nezve iyo Pandas Bears inoshamisa. Vakawanda vanoona zvakaoma kugaya kuti iyi mhuka inoita seisingakuvadzi yakaoma kudaro. Imwe yenyaya dzakadai ndizvo zvakaitika kuna Zhang Jiao ane makore makumi maviri nemasere. Mwanakomana wake akadonhedza toy yake kwaive nePanda Bear inonzi Gu Gu, uye paakaedza kuitora, akatambudzwa zvakanyanya nayo.
VaJiao vakatambura apo mhuka iyi yairuma gumbo, asi chinonyanya kushamisa ndechekuti hapana chavakaita kuti vamise kukuvara. Zvakanaka nekuti senge akawanda maitiro, ane rukudzo rukuru kune iyo Panda Bear, uyo waanotora senge pfuma yenyika. Anoti ivo vakanaka uye anofara kuti vanogara vachidya senge pasi pemiti. Aya maitiro ekushamisa zvakanyanya!
Chinhu chinonyanya kufarira pane zvese ndechekuti kana zoo ichida, inogona kutora matanho epamutemo kurwisa Zhang Jiao nekupinda munzvimbo yakatemerwa vanhu, senge nzvimbo yePanda Bear.
Panda inobereka Gu Gu
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti Bear Gu Gu yakatouya nenhoroondo yekurwisa vanhu. Gore risati rasvika chiitiko chinorwadza ichi naZhang, mhuka iri kubvunzwa yakarwisa mudiki wemakore gumi nemashanu chete nekuda kwekukwira kumiganhu yenzvimbo yaive nemhuka. Uye makore mashoma apfuura, akarwisa mutorwa akadhakwa nekuti akamumbundira.
Zvechokwadi mhuka zvakasikwa uye hazvirwisane nekuda kwemafaro asi nekuti vanonzwa kutya uye ndiyo chete yavo nzira yekudzivirira. Nekudaro, kune vese avo vaifunga kuti iyo Panda Bear yaive mhando yemhuka yakamisikidzwa, munhu akadzikama uye anotapira, vakatoona kuti zvirinani kugara wakangwarira uye kuremekedza rairo dzemazowe.
Wanga uchiziva here kuti zvemadhora zana iwe unogona kuve nePanda Bear padyo uye nekudyidzana nayo? Hongu, zvinonzi vakasimudzwa zvakanaka uye vakadzidziswa munzvimbo yakachengetedzwa vane hushamwari. Asi zviri nani dzimwe nguva vasiye vakadzikama uye vakasununguka kusatambura kumwe kwekurwiswa kwake, uko kunogona kupedzisira kuchikanganisa hupenyu hwake hwese, kana zvakanyanya, kufa.
Iwe watoyambirwa, vashanyire asi ndapota, nehungwaru hukuru uye rudo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Panda Bear: pakati porudo nekutya
Naamai vangu vamwari akadaro
Nzvimbo yakanaka! Ndakaiverenga nemuzukuru wangu ane makore masere ekuberekwa nekuti taive nekusahadzika kuti panda ingarwisa vanhu here.
Makorokoto pabhuku rakazara rakadai, ratibatsira kudzidza zvakawanda nezve pandas! Ndatenda! 🙂
Pindura kuna Mwari vangu
Kunyora kwakanaka kwazvo, chokwadi chakanakisa, ndaidawo kuziva kuti pandas dzinogona kuvenga here, kunyange zviri pachena kuti vanogona kubva kumhuri yeursidae zvakadaro, bere rinorema anopfuura makirogiramu mazana maviri rinogona kukuvadza zvakanyanya nekurohwa kamwe chete iyo paw chokwadi, nenzira China ndiyo nyika ine ndima yakakura kwazvo inogarwa nemunhu asi kwete iyo hombe ingadai iri Russia
Mahotera ane zvirongwa zvakasiyana zveZuva raValentine
Palmyra, chishamiso chegwenga reSyria